सालझण्डी-तम्घास फास्ट ट्रयाक, गुल्मेलीले गर्व गर्ने खालको देशकै नमूना सडक! – Chakra Jwala
Posted on 10 Jul 2015 15 Feb 2017 by Chakra Bhandari
प्रेम सुनार, गुल्मी, असार–२५ । सदरमुकाम तम्घासबट जिपमा साँघुरो बाटो मुस्कीलले छिचोल्दै खज्र्याङ्गमा पुगेर सालझण्डी तम्घास फास्ट् ट्रयाकमा खन्दै गरिएको सडकको चौडाई हेर्दा त्यो सडक नभई खेल मैदान हो कि जस्तो लाग्छ । वुटवलबाट पाल्पा हुँदै तम्घास सम्म ५ घण्टा भन्दा बढि समय लाग्ने गरेकोमा अव उक्त फास्ट् ट्रयाक सम्पन्न भए पछि बढिमा दुई घण्टामा तम्घास आईने बताईएको छ । १ सय ११ किलो मिटर बुटवल तान्सेन तम्घास सडक खण्डको दुरी रहेकोमा सालझण्डी तम्घास सडक खण्डको दुरी जम्मा ६९ किलो मिटर मात्रै रहेको छ र त्यो सडकको चौडाई १० मिटर हुने छ ।
त्यति मात्र होईन उक्त फास्ट् ट्रयाक खज्र्याङ्गबाट चार स्थानमा विभाजित हुने छ । त्यहाँबाट खज्र्याङ्ग अर्घाखाँची हुँदै सुर्खेत सम्म जाने छ । त्यसका लागि पक्की पुल वाहेक छ
करोड छुट्टाईएको गुल्मी क्षेत्र नम्वर २ का सभासद चन्द्र भण्डारी बताएका छन् । खज्र्याङ्ग बाट वलेटक्सार हुँदै उल्लीखोला पुराईने छ र त्यसले क्षेत्र नम्वर १ का जनता लाभान्वित हुने छन् । त्यहाँ तर्ने पक्की पुल बनाउने काम सुरु भई सकेको छ । त्यस सडकका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै खज्र्याङ्ग हुँगा हुँदै सिस्ने जाने छ र त्यसका लागि ६ करोड छुट्टाईएको छ । सिस्नेमा पक्की पुल बन्ने काम समेत सुरु भएको छ । फेरी खज्र्याङ्ग चारपाला हुँदै मजुवा पुराईने छ। अनि सदरमुकाम तम्घासबाट बडागाउँ हुँदै वामीटक्सार जाने छ र त्यहाँबाट वाग्लुङ्गको ढोरपाटन , पोखरा सम्म जोडिने छ । जसले गर्दा अर्घाँखाँची तर्फ खन्न सुरु गरिएको सालझण्डी
ढोरपाटन सडक खण्ड भन्दा यो ४० किलो मिटर दुरी कम हुने छ। पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत , वाग्लुङ्ग, अर्घाखाँची प्युठान र सुर्खेत सम्मका जनता यसै फास्ट् ट्रयाक अन्तर्गत आवत जावत गर्न थाले पछि हाल सम्म बढि चहल पहल देखिएको तानसेन र रिडी वजार अव खज्र्याङ्ग हुने छ । ति चार वटै सडक खण्डको केन्द्र विन्दु खज्र्याङ्ग हुने र त्यहाँ ठुलो वसपार्क बन्ने बताईएको छ । अहिले अर्घाखाँचीको पटौती हुँदै
खज्र्याङ्ग सम्म २० किलो मिटर सडक खन्ने काम तिब्र गतिमा अगाडी बढेको छ । कुल ६ अर्व ६५ करोडमा बन्ने सालझण्डी तम्घास फास्ट् ट्रयाक अन्तर्गतका सवै सडक खण्ड ५ वर्ष भित्रमा पुर्ण रुपमा सम्पन्न हुने सभासद भण्डारीको भनाई छ । सिद्धवाव लगायत वुटवल तान्सेन तम्घास सडक खण्डमा पटक पटक दुर्घटनाले कैयौंको ज्यान गई रहेको अवस्थामा यस फास्ट् ट्रयाकले छिटो आवत जावतको सुविधा मात्र नदिएर सुरक्षाको प्रत्याभुति समेत दिने भण्डारीको दावी रहेको छ । ‘पहाडी राजमार्गहरु मध्ये यो फास्ट् ट्रयाक देशकै नमुना सडक हो’– सभासद भण्डारीले भने–‘ यो ऐतिहाँसिक काम हो, यसमा सवै गुल्मेलीले गर्व गर्नु पर्दछ । ’
ज्ञवा सञ्चार अभियानले यो समाचार लेखेको हो।
Previous Post नर्बे पढ्न जान चाहनुहुन्छ?
Next Post गुल्मी जोहाङमा मुनलाइट खेलमैदान निर्माण शुरु!
3 thoughts on “सालझण्डी-तम्घास फास्ट ट्रयाक, गुल्मेलीले गर्व गर्ने खालको देशकै नमूना सडक!”
Pingback: गुल्मीलाई बिकासमा नमुना जिल्ला बनाउन आफु लागि परिरहेको सांसद भण्डारीको भनाइ | Chakra Jwala
Narayan Prasad Panth says:
12 Feb 2017 at 4:57 am
dherai raamro kura sunna paiyo yo kaanle …la xito bhanda xito yo butawal dekhi tamghas sadak khanda sampanna hos haami kaamana gardaxau ra prmukh sallahakaar yojanakaar ani karya pramukh haamra samsad chandra bhandari jiu laai haardik haardik dhanyavad gyapan garna chahanchhau…
12 Feb 2017 at 6:26 am
तपाइको अपेक्षा छिट्टै पूरा होस्